AC Milan oo heshiis la gaartey Andrea Conti – Gool FM
(Milano) 09 Juunyo 2017 – Wakiilka dadabka midig ee Andrea Conti ayaa daboolka ka rogey inay la heshiiyeen kooxda Milan oo uu sheegay inuu laacibku doonayo, balse wuxuu sheegay inaysan weli heshiinnin Milan iyo Atalanta.
Kooxda Rossoneri ayaa xalay kulan 3 saacadood iyo dheeraad qaatay la gashay wakiilka daafacan soo baxaya, kaddib fasal-ciyaareed uu dhaliyay 8 gool iyo 5 uu dhigay intii uu joogey kooxda Orobici.
“Shalay baan Milan la kulmay, waana heshiinney, wuxuu laacibku doonayaa Milan, heshiisku waa ka xiran yahay ugu yaraan dhankeenna. Atalanta & Milan xiriir wanaagsan bay leeyihiin oo waxay ku heshiiyeen [Franck] Kessié,” ayuu Mario Giuffredi u sheegay idaacadda Radio Crc.
Kooxda Milan oo la qaban la’yahay dhanka suuqa ayaa horay u qaadatay Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez iyo Kessié, iyagoo weli raadinaya khad dhexe, garab-weerar iyo weerar dhexe oo muhim ah, tiiyoo uusan weli furmin suuq-xagaagu.